Trump: Aad Ayaa Ugu Kalsoonahay Boqor Salmaan iyo Dhaxal Sugihiisa – Goobjoog News
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay boqorka Sacuudi carabiya Salmaan binu Cabdul Caziiz iyo dhaxal sugihiisa Maxamed Binu Salmaan, arrinkaani ayaa yimid ka dib markii ay ku dhaqaaqen madax ka tirsan boqortooyada Sacuudiga inay xirxiraan amiiro wasiiro hadda ka tirsan boqortooyada kuwaas oo ay ku eedeeyeen falal la xiriira musuq.
Trump ayaa yiri “Aad ayaan ugu kalsoonay boqor Salmaan iyo dhaxal sugihiisa”
Dhanka kale xeer ilaaliyaha guud ee Sacuudiga Sacuud Al Mucjib ayaa sheegay in wixii dhacay 4 November ay aheyd marxaladda koowaad ee lagula dagaalamayo musuq-maasuqa.
Tillaabadaas kadib ayaa Sacuudiga waxaa soo gaarayey dhaleeceemo uga imaanayay Iran iyo is bahaysigeeda, ka dib markii ay ku tuhuntahay ururka xisbullahi inuu sameynayo wax ka dhan ah waxayna ku tilmaantay waxa loogu yeero dagaal ogeysiin.
Sacuudiga ayaa dhankiisa ku eedeeyay Iran inay ka dambeysay gantaal ay xowthiyiinta ay ku soo rideen Sacuudiga sabtidii la soo dhaafay.
Balse Iran waa ay iska diiday hadalka ka soo yeeray Sacuudiga,iyada oo hoosta ka xariiqday in Sacuudiga uu qalqal ammaan uu ka wado bariga dhexe.
Ebuagj oltcxl Cialis on sale cialis professional
Akbfyf ktsoly canadian pharmacy cialis cialis online canada
Twkopd klurfr cialis pills cialis 5 mg...
Vbzwke alttcc buy cialis generic cialis...
Dxibjb nlclnv ed pills cialis otc...
Evgyed jmaepc sildenafil 100mg cialis 5mg price...
Pefssm yaerjt Sale viagra cialis generic...